Podman: imwe nzira kumidziyo ine Docker | Linux Vakapindwa muropa
podman Iyo injini yemidziyo inogona kutsiva Docker. Iyi injini yakagadziridzwa nekambani yeRed Hat (ikozvino yave neBMM) uye inotarisira kuifambisa zvishoma nezvishoma. Zvichabudirira here? Zvakanaka tichaona…
El open source chirongwa ine nyore kusununguka kwekushandisa, inova dhizaini hombe. Uku ndiko kureruka kuti pane chinyorwa naDan Walsh, Red Hat injinjini, maanoratidza nhanho dzekutama kutsiva Docker naPodman, uye vaive aya:
Uye pasi peiyo rondedzero akapedzisa nekutaura «Chero mibvunzo?»Nekamwe kuseka nekuda kwekureruka kuri ...
Kunze kwaizvozvo, kana iwe watove wajaira kushandisa Docker haufanire kunetseka zvakanyanya nezve mirairo, sezvo Podman anoshandisa izvo zvakafanana kune chikuru chikamu. Ndokunge, kana uchimhanyisa mudziyo unofanirwa kushandisa docker runomhanya, kuti uzviite neiyi imwe chirongwa iwe yaunofanirwa kushandisa podman mhanya. Zviri nyore kurangarira sarudzo.
Zvakanaka, parizvino zvese zvinoita kunge zvakafanana. Mapurojekiti ese ari maviri akanaka, akavhurika sosi, shanda nemidziyo, zviri nyore, shandisa syntax imwechete, nezvimwe. Asi zvadaro? Chii chinonzi Podman kuti chikoshe kuti uve nacho? Zvakanaka, mumwe wemisiyano ndeyekuti kwete kwakavakirwa pamadhimoni (masevhisi ari * nix pasi).
Sezvaunoziva, Docker ine daemon inosangana nayo. Dhimoni iri rakasarudzika uye rakaiswa pakati, izvo zvinoreva kuti kana iwe uchiwedzera midziyo yaunoshandisa, kuoma kwayo kuchakura uye kuva inorema uye inorema. Ndokusaka Red Hat yasarudza kugadzira ichi chimwe chishandiso kugadzirisa izvo zvakashata.
MuPodman vane decentralized zvinoriumba yecontainer manejimendi uye nekudaro dzivisa iyo kuwedzerwa kwedemon sezvinoitika muDocker. Izvo zvikamu zvega zvega zvinongoshandiswa pazvinenge zvichidikanwa, izvo zvinoguma nekushandisa kushoma kwesosi
Pamusoro peiyo mukana, ine imwezve mukana mukuru. Podman anogona kubata midziyo nenzira imwecheteyo seDocker, asi zvakare unogona kuzviita nemaPodhi, ndiko kuti, madhiraivha ayo anoshandiswa muKubernetes. Musiyano wakakosha pakati pemudziyo nePodhi ndeyekuti Podhi imwe neimwe inogona zvakare kuve nemidziyo inopfuura imwechete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Podman: imwe nzira yemidziyo ine Docker
Iyo mudziyo nemidziyo inobata ichakunda iyo, musimboti, inoshanda zvakanyanya mune zviwanikwa, inobvumidza kupatsanurwa kwezvose zvirongwa uye mashandisiro ehurongwa nenzira yakadzika kwazvo inogoneka uye pakupedzisira, inofanira kuve yakaiswa mune dzakasiyana Kushanda. Masystem asina izvozvo anokanganisa kuvakwa kwemidziyo, kuuraya uye kugovera.
PS: kunyangwe isina kukosha zvishoma, unogona kuwedzera chishandiso chinokutendera kuti uite zviito zvakafanana nezveconsole.
Kwokutenga komputa yeLinux
Valve inowana imwe yekuvandudza yevatyairi vemifananidzo